I-Paramagnetism Inkcazo kunye nemizekelo
Indlela iParamagnetic Materials Work
I-Paragnetism ibhekisela kwipropati yezinto eziphathekayo ezibuthakathaka kummandla wamagnetic. Xa zibonakaliswe kwintsimi ye-magnetic yangaphandle, iindawo zangaphakathi zendalo ezifakwe ngaphakathi zifomathi kwizinto eziyalelwe kwinqanaba elifanayo njengentsimi esetyenzisiweyo. Xa iseshoni esetyenzisiweyo isuswe, loo nto ilahlekelwa yimagnnetism yayo njengendlela yokutshintsha kwe-thermal i-oriented spin orientation.
Izinto ezibonisa i-paramagnetism zibizwa ngokuba yi- paramagnetic . Ezinye izixhobo kunye nezinye izinto zeekhemikhali zi-paramagnetic. Nangona kunjalo, iipamagnet zinyaniso zibonisa ukukhutshwa kwamagnetic ngokwemiqathango yeCurie okanye iCurie-Weiss kunye nokubonisa i-paramagnetism kwiqondo elibanzi lokushisa. Imizekelo yamaphamethitha ibandakanya ukuhlanganiswa kwe-myoglobin, nezinye izakhiwo zetsimbi, i-oxide yensimbi (i-FeO) kunye ne-oksijini (O 2 ). I-Titanium kunye ne-aluminium zizinto zetsimbi eziphambili.
Ii-Superparamagnets zixhobo ezibonisa iimpendulo ze-paramagnetic net, kodwa zibonisa i-ferromagnetic okanye i-ferrimagnetic i-order in level microscopic. Ezi zinto zihambelanayo nomthetho weCurie, kodwa zineenkalo ezinkulu kakhulu zeCurie. I-Ferrofluids ngumzekelo wama-superparamagnets. Ii-superparamagnet eziqinileyo nazo zingaziwa ngokuba yi-mictomagnets. I-AuFe i-alloy ngumzekelo we-mictomagnet. Amaqoqo ahlanganiswe ngama-ferromagnetic kwi-alloy afudumele ngaphantsi kweqondo lokushisa elithile.
Indlela iParamagnetism isebenza ngayo
I-paramagnetism ibangelwa kubuncinane bee- electron ezingenasiphelo kwi-atom okanye i-molecule. Ngoko ke, nayiphina impahla ephethe i-atom ngokungazalwanga ngokupheleleyo i-atomic orbitals yi-paramagnetic. Ukugqithwa kwee-elektronon ezingenakunyulwa kukunika umzuzu we-dipole omangalisayo.
Ngokwenene, i-elektron nganye engasebenziyo isebenza njengemagnnet encinci. Xa kusetyenziswa intsimi yangaphandle yamandla, i-spin ye-electron ihambelana nentsimi. Ngenxa yokuba zonke iifowuni ezingenasiphelo zihambelana ngendlela efanayo, izinto ziyakhangwa kwintsimi. Xa intsimi yangaphandle isuswe, i-spins ibuyela kwii-orientation zabo ezingaqhelekanga.
I-magnetization cishe ilandela umthetho kaCurie . Umthetho weCurie uthi ukukhusela kwamandla ombane i-χ kuhambelana nobushushu:
M = χH = CH / T
Apho iM i-magnetization, i-χ iyakwazi ukumelana nombane, H iyinsime yamandla encedisayo, i-T iyona ndlela yokushisa (Kelvin), kunye no-C yinto eqhubekayo yeCurie
Ukuthelekisa iintlobo zeMagnetism
Izinto eziphathekayo ziyakwazi ukuchongwa njengenye yeendidi ezine: i-ferromagnetism, i-paramagnetism, i-diagnetism, kunye ne-antiferromagnetism. Ifom ephezulu kunazo zonke i-ferromagnetism.
Izixhobo ze-Ferromagnetic zibonisa ukutsalana kwamagnetti okunamandla okwaneleyo ukuvakalelwa. Iimveliso ze-Ferromagnetic kunye ne-ferrimagnetic zingase zihlale zimatshini emva kwexesha. Amagnet aqhelekileyo esekelwe kwinyithi kunye namagnethi omhlaba ongaqhelekanga abonakalisa i-ferromagnetism.
Ngokuchasene ne-ferromagnetism, imikhosi ye-paramagnetism, i-diagnetism, ne-antiferromagnetism ibuthathaka.
Kwi-antiferromagnetism, iziganeko zamagalekhi okanye i-atom zihambelana nomzekelo apho ummelwane we-electron ahlawula umgama kwiindlela ezichaseneyo, kodwa ukulandelana kwamagnetha kuphezu kweqondo lokushisa elithile.
Izixhobo zeParamagnetic zithinteka kakhulu kummandla wamagnetic. Izinto ze-Antiferromagnetic ziba yi-paramagnetic ngaphezu kweqondo lokushisa.
Izixhobo ze-Diamagnetic zinyanzeliswa ngamandla ngamaginethi. Zonke izinto zinezinto ezidakayo, kodwa into engabizwa ngokuba yi-diamagnetic ngaphandle kokuba enye i-magnetism ingekho. I-Bismuth kunye ne-antimony yimizekelo yamademane.
I-Chemiluminescence: Inkcazo kunye nemizekelo
Iingqungquthela zeBronsted Lowry ye-Acids kunye neZiseko
I nkcazo yeqela
Inkcazo ye-Hydrophobic kunye nemizekelo
Inkcazo Inkcazo engqinelanayo (Ukunciphisa iReagent)
Yintoni i-Element eKhemistry? Inkcazo kunye nemizekelo
Isiqulatho Inkcazo kunye neMimandla eKhemistry
Ukuphucula amandla Ukuchaza
Isikhokelo seZiko eliMnandi kwiHlabathi, akukho nto iluphi uhlobo lwe-Skier oyiyo
I-Lord of the Flies 'Review
I-10 ephezulu yeRihanna Music Videos
I-Cathars & Albigenses: Yayiyintoni iCatrism?
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yaseLoos
Iimvavanyo zesiLwimi zesiJamani - Icandelo I
I-NELSON Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
8 ama-opciones para profesionales afana nomthetho we-USA
Iindaba zeNdlovukazi uEstere kunye neholide yamaJuda ePrim
IQumrhu Elifanelekileyo Elifundayo Isikhundla Esiqalile UkuDafa
Isikhokelo kuLohri, uMthendeleko wamaHindu weHlabathi weHindu
Iingoma ezi-10 eziphezulu zeColdplay
Funda xa i-TV yokuqala ibhengezwa
Ukujonga Emuva: D-Day kwimifanekiso
I-PSAT VS. SAT Rededigned SAT
Ukwahlukana Inkcazelo kwiKhemistry
Ukunyuka kweNyanga ngeMpawu (i-Aries ku-Virgo)
Peter Alliss Bio
UWilliam Quantrill, uJese James, kunye ne-Centralia Massacre
Imbali emfutshane yeSibambiso sokuBamkela
Tu Quoque (Logic Fallacy) - Inkcazo kunye nemizekelo
Ngaba Uncedo Lwezonyango Lwabafuduki Abangemthetho Bafihliwe Ngaphansi Kwe-Obamacare?
Yintoni i Karma?
Ezinye unyango lwe-Tinnitus